राउटेको हनिमुन : छुट्टै छाप्रो बनाएर मनाउँछन् नव दम्पतीले ... ! - Sagarmatha Online News Portal
राउटेको हनिमुन : छुट्टै छाप्रो बनाएर मनाउँछन् नव दम्पतीले … !
काठमाडौं । लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको नेपालको राउटे जातीको विवाहपछिको सुहागरात (हनिमुन) मनाउने तरिका अचम्म लाग्दो छ । विवाह गरिसकेपछि दुलाहा दुलहीको लागि राउटे बस्तीभन्दा अलि पर एकान्तमा छुट्टै छाप्रो बनाएर हनिमुनका मनाउने गरेका छन् ।
‘मिलेसम्म छुट्टै छाप्रो बनाएर बस्छौं । काठ काट्न र सिकार खेल्न जंगलतिर नव दम्पती जान्छौं ।’ राउटे युवती मैना शाहीले लजाउँदै भनिन, ‘केही दिन रमाइलो गर भनेर सबैले छोडिदिन्छन् । परिवार र मुखियाले पनि केही काम लगाउँदैनन् ।’ केटाकेटीले आपसमा मन पराएपछि बुहारी माग्न जाने, विवाहको मिति तय गर्ने र सानोतिनो भोज गरेर विवाह गर्ने चलन छ । भोजका रूपमा उनीहरू भात, मासु र जाँड बनाउँछन् । मासुका लागि उनीहरुले बाँदरको शिकार गर्ने गर्छन् ।
जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे युवायुवती कसरी रमाइलो गर्छन् होला ? यो जिज्ञासा मेट्न दुई वर्षसम्म विभिन्न समयमा फिरन्ते राउटेसँग साक्षात्कार गर्ने क्रममा केही रमाइला प्रेम प्रसंग भेटिएकाका छन् । अन्य समुदायमा जस्तै राउटे युवायुवती पनि आपसमा भेटघाट र रमाइलो गर्छन् । भेटघाटका लागि टाढै नगए पनि बसोबास गरेकै स्थानमा एक्लै भेटेर कुराकानी गर्छन् । मस्किदै कुरा गर्छन् । जंगलमा दाउरा लिन जाँदा, टहरा बनाउने काम गर्दा अनि चाडपर्वमा नाचगान गर्दा पनि उनीहरू भेटघाटको तालमेल मिलाउँछन् । राउटेहरूले सामान्यतः नुहाउन मन नगर्ने भए पनि युवतीहरू नुहाएर सफा हुन्छन् । सकेसम्म सिँगारपटार गर्छन् । उपलब्ध गहनामा ठाँटिन्छन् । उनीहरुलाई मनपर्ने श्रृंगारको सामान भनेको पोते हो ।
कतिपय युवती चिटिक्क परेर पनि बस्छन् । चिटिक्क परेका बेला उनीहरू राउटे युवतीजस्ता पनि देखिँदैनन् । युवायुवतीबीच प्रेमभन्दा मागी विवाह प्रचलनमा छ । कसैको लभ परेको भए उनीहरू अभिभावकसँग कुरा गरेर विवाहको तयारी गर्छन् । सामान्यतः यस प्रकारको घटना भने बिरलै भेटिएको छ । केटाकेटीले मन पराएपछि अभिभावकले अस्वीकार गर्दैनन् । छोराको विवाहका लागि मगनी गर्न अभिभावकले केटीको घरमा पाहुर लिएर जानुपर्ने चलन छ । पाहुर स्वरूप मह, मासुआदि मीठा खानेकुरा लिएर जाने प्रचलन रहेको मुखिया मैनबहादुर शाहीले बताए ।
मह दिएर खुसी पारेपछि बुहारी पाइने सम्भावना बढीहुन्छ । शाहीका अनुसार उपहार स्वीकार गरेपछि छोरी दिनुपर्ने हुन्छ । विवाह पक्कापक्की जस्तो हुन्छ । विवाहमा केटा पक्षले केटीलाई गहनाहरू दिने चलन हुन्छ । सिल्पटका चुरा, कानमा रिङ, पोतेजस्ता गहना र सम्भव भए एकसरो नयाँ कपडाले दुलहीलाई सिँगारिन्छ ।
Published On: २ असार २०७६, सोमबार 313पटक हेरिएको